HETRA ATY ANTSIRANANA : Amin’ny ora farany vao nifanitsa- kitro ireo mpandoa hetra
Manao tsy omby afara. Ny alarobia 31 marsa no fantatra fa fem-potoana farany tokony handoavan-ketra manerana ny Nosy. 6 avril 2021
Raha ny aty Antsiranana manokana no resahina dia tsikaritra fa tamin’ny fe-potoana farany vao betsaka ireo olona manana orinasa na anton’asa mandoa hetra vao nihazakazaka tao amin’ny biraon’ny sampandraharahan’ny hetra taty Antsiranana.
Araka izany dia nivangongo ireo antontan-taratasy, feno hipoka hatramin’ny ivelan’ny birao ireo mpandoa hetra, ilaharana ny fandoavana izany taty an-toerana. Araka ny voalaza fa saika amin’ny fem-potoana farany tahaka izao no maha betsaka olona tonga mandoa hetra. "Amin’ny fahamaroan’olona tahaka izao dia lasa taraiky ny asa, ny tompon’andraikitra no omena tsiny amin’ny farany, nefa nanomboka ny volana janoary dia efa azo atao ny mandoa hetra ny taona 2021”, araka ny nambaran’ny mpiasan’ny hetra tafaresaka taminay.
Araka ny fantatra hatrany fa manomboka ny voalohany avrily izao dia efa mihatra avy hatrany ny fandoavana ny sazy na "pénalité" raha misy fahatarana amin’ny fandoavan-ketra. Izay voalaza fa 1% isam-bolana no aloa ambonin’ny tokony haloa amin’ny hetra isan-taona.
Etsy ankilany nilaza ny mpandoa hetra iray sendra anay fa nanomboka ny taona 2020 noho ny fisian’ny coronavirus dia tsy misy asa nandeha, izay no antony nahatara azy ireo amin’izao fandoavan-ketra izao. Notsindriany ihany fa misy amin’ireo namany no mbola tsy nahaloa hetra ny taona 2020, ary ahitana izay voatery nanajanona ny asa amin’ireo olona mitangorona ireo, mba tsy ho bokan-trosa amin’ny fandoavan-ketra.
Tamin’ny fandalovan’ny tao amin’ny biraon’ny hetra ny alarobia 31 marsa teo dia tsikaritra fa ireo olom-pirenena manana anton’asa taksy sy mpivarotra lamba, mpivarotra entam-barotra madinika no nahafeno ny birao hatramin’ny lalantsara.
Samy nihazakazaka ny rehetra mba tsy handoavana ny 1 % ambon’izay tokony aloha. Fantatra nandritra izany fa mandoa 250 000Ariary ireo manao taksy bajaj, fa ireo mpivarotra lamba sendra anay dia nilaza fa mandoa 150 000Ariary.
Ilaina fanamafisana ny fanentanana amin’ny fandoavan-ketra, raha ny zava-misy no asian-teny. Tsy vitsy no mihevitra fa latsaka an-katerena amin’ny fandoavana izany. Tsara ho fantatra fa tsy sazy ny fandoavan-ketra fa adidy ho an’olom-pirenena, indrindra ihany koa mba hirosoana amin’ny fampandrosoana.
Noho ny fahamaroan’olona dia tsy nitsahatra ny nanafatra ireo mpiasa tao anaty birao amin’ny tokony hanajana ireo fihetsika sakana, amin’izao fisian’ny valanaretina Covid-19 izao.